भरखरै प्रचण्डलाई सर्वोच्च अदालतको झट्का , माओबादीको प्लान फेल - Kailash Post
भरखरै प्रचण्डलाई सर्वोच्च अदालतको झट्का , माओबादीको प्लान फेल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यस अघि पार्टीको नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध दिएको निवेदनको पनुरवलोकन नहुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितको तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले सो आदेश भएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी गराउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिनुभएको सो रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएकाे हाे ।
ऋषिराम कट्टेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाम आफ्ना पार्टीको नामसँग जुधेको भन्दै दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गर्ने फैसला गरेको थियो ।
सो फैसलाविरूध्द गत मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुनरवलोकनको निवेदन दिनुभएकाे थियो।
प्रचण्डलाई देउवाले पत्याएनन्
परिवेश अनुसारको भेष बदल्न सिपालु नेताका रुपमा परिचित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड पछिल्लो पटक जतात्यत्तै निराश हुने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि निक्कै हौसिनु भएका प्रचण्ड त्यहि दिनदेखी निराशामात्र हात लागि रहेको छ ।
पछिल्लो पटक फेरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधामन्त्री अफर गर्न पुग्नु भएका प्रचण्ड निराश भए फर्कनु भएको हो । यसअघि नै प्रचण्डले डा.बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर लगायतलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर गरिसक्नु भएको छ । मंगलबार देउवा भेट्न उहाँ बुढानिलकण्ठ पुग्नु भएको थियो ।
भेटमा कांग्रेसका सभापति देउवाले जनता समाजवादी दल र यहाँहरुको स्पष्ट धारणा नआएसम्म सरकारमा जाने कुरा नगर्न दाहाललाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
‘अदालतको आदेश पुनरावेदन दर्ता गराएर यता सरकार बनाउने विषय गर्न आउनु भएको छ,’ देउवाको भनाईलाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भन्नुभयो, ‘यहाँहरूलाई कसरी बुझ्ने ? स्पष्ट धारणा के हो ? कसरी जाने भन्ने पहिला यहाँहरू स्पष्ट भएर आउनु होला अनि सहकार्यको विषयमा कुरा हुन्छ ।’
ढुक्क हुने कुरा नै नभएकाले पनि अन्यौलता रहेको उहाले स्पष्ट पारिदिनु भयो । देउवाले दाहाललाई कसैको समर्थन र विरोध भन्दा पनि विधिको शासनलाई कांग्रेसले अंगाल्ने बताएपछि दाहालले आफूले त्यसप्रकारको वातावरण तय गर्ने बताउनु भएको थियो ।
दाहालले यहाँले (देउवा) नै सरकारको नेतृत्वगरेर नयाँ सरकार बनाउन पर्ने भन्दै त्यसको लागि पहल गर्ने बताउनु भएको थियो ।
माधव नेपाललाई पार्टीले कार्वाही गरेपछीको पहिलो तहल्का
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशमा संकट नपरेको दाबी गरेका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा भएको रिपोर्टर्स क्लबको २३ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई नभएर नेपाल र प्रचण्डलाई संकट परेको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत रुपमा संकट परेकोलाई देशमा संकट पर्‍यो भन्न नहुने धारणा राखे।
‘देशमा संकट पर्या छ रे। केपी ओलीलाई संकट पर्‍या होला, प्रचण्डलाई संकट पर्‍या होला, माधव नेपाललाई संकट पर्‍या होला, देशलाई कहाँ पर्‍यो संकट?,’ उनले प्रश्न गरे।ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संकट नपरेको जिकिर गर्दै चुनाव भएर संकट पर्ने हो भने २० महिनापछि देशमा संकट पर्ने हो भन्दै प्रश्नसमेत गरे।
‘तपाईंहरूलाई के मा संकट पर्यो भन्नुस् त ? तनखा आएन कि ?, जागिर गयो कि ?, मजदुर, किसान, व्यवस्था, संविधानमा कहाँ संकट पर्यो?,’ दर्शकदिर्घातर्फ प्रश्न गर्दै उनले भने।
उनले एकता भन्ने शब्दको हुर्मत प्रज्ञा भवनको डबलीमा बसेर लिईएको भन्दै आलोचनासमेत गरे। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई केही विमारी त आफूले नदेखेको पनि उनको जिकिर छ । उनले चुनाव गर्दा लोकतन्त्रलाई खतरा कसरी पर्छ ? भन्दै प्रतिपश्न गरे ।
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस अदालतले बदर गरेको उल्लेख गर्दै आफू कुनै आवेश र उत्तेजनामा नआएको स्मरण गराए । उनले अदालतको फैसलालाई आफूहरुले मान्ने र कार्यान्वयन गर्ने पनि सुनाए । संसद् पुनःस्थापना हुँदा अदालतलाई गुणगान गर्दै अविर जात्रा गरेको भन्दै प्रचण्ड र माधव नेपालतर्फ ईंगित गर्दै पछि उनीहरुले नै फेरि अदालतको आदेशको आलोचना गरेको पनि उनले टिप्पणी गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उल्टापाल्टा कुरा नगर्न आग्रह गरेका छन्।
पार्टी एकताकै बेकारको कुरा डबलीमा गर्दै हिँडेको भन्दै ओलीले प्रचण्डलाई बेकारका उल्टापाल्टा कुरा नगर्न भनेका छन्।
नेकपा खारेज गरेको विषयमा प्रचण्डले आज सर्वोच्चमा मुद्दा दिएका थिए। त्यसतर्फ संकेत गर्दै ओलीले अदालतले पार्टी मिलाइदिने हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
साथै निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी दर्ता गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।‘निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी दर्ता गर्न कसले रोकेको छ?,’ रिपोर्टस् क्लवको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अनि अदालतमा पार्टी एउटै गरिपाऊँ भन्ने? अदालतले गरिदिने हो पार्टी एकता? पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो?’
मञ्चमा रहेका जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरतर्फ हेर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि महन्थको पार्टी मिलाइपाऊँ भनेर निवेदन हाल्ने बताए। ‘म पनि महन्थजीको पार्टी मिलाइपाउँ भनेर निवेदन हाल्छु। उहाँ र म नमिल्ने अनि अदालतमा गएर मिलाइपाउँ भन्ने कुनै राजनीति भयो?,’ उनले भने।
उनले प्रचण्डलाई मिल्ने हो भने मिल्ने बाटो हिँड्न भनेका छन्। ‘मिल्ने हो भने प्रचण्डजी मिल्ने बाटो हिड्नु, डबलीको भाषा बोलेर बेकारका उल्टापाल्टा कुरा नगरेको वेश,’ उनले भने। ऋषि कट्टेललाई अदालतले न्याय दिएको उनले बताए।
फागुन २३ मा नेकपा ऋषि कट्टेलको भएको सर्वोच्चले फैसला गरिदिएको थियो। त्यससँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुन: अस्तित्वमा आएका थिए।
भीडीयो हेर्न यहाँ जानुहोला
प्रचण्डलाई फेरी देउवाले हिस्स पारे